तपाई 400०० अन्य बजारसँग तुलना गर्दै हुनुहुन्छ? | Martech Zone
तपाईं 400०० अन्य बजारसँग तुलना गर्दै हुनुहुन्छ?
बिहीबार, अगस्ट 7, 2014 शुक्रबार, अगस्त 8, 2014 Douglas Karr
हामीले हालै एउटा उद्यम कम्पनीसँग केही अविश्वसनीय बैठकहरू गरिरहेका छौं। उनीहरूसँग सबै चुनौतीहरू छन् जुन तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ - एउटा सानो टोली, उद्यम संरचना, फ्रेंचाइजी, ईकमर्स ... कामहरू। समयको क्रमसँगै, तिनीहरू आफ्नो सानो टोलीसँग टेक्नोलोजीको हज-पोडमा विकसित भएका छन् जुन प्रबन्धन गर्न बढि गाह्रो भइरहेको छ। हाम्रो काम भनेको आफ्नो रणनीति नक्शा बनाउने र लचिलो समाधानमा केन्द्रीकृत गरेर र लगानी गरेर तिनीहरूको लागतहरू कम गर्ने। यो मुटुमा बेहोशको लागि काम होईन।
जब हामी टेबुलमा बस्छौं, टोली प्राय: दुवै खुला र निराश हुन्छन् जुन उनीहरूले खुला छोडेका छन् वा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा तिनीहरूको गतिको अभावमा। यस्तो देखिन्छ कि जब म कुनै कम्पनीसँग भेट्छु तब तिनीहरूको टोलीको पनि यस्तै प्रतिक्रिया हुन्छ। मार्केटिंग संसाधनहरू यस अर्थव्यवस्थामा लक्जरी हो र कम्पनीहरूले लाज मान्नु हुँदैन कि उनीहरूले जारी राख्न असमर्थ छन्। उद्योग द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ, र वस्तुतः प्लेटफर्मले मार्केटिंग डलरको लागि स .्घर्ष गरिरहेको छ - हेकलाई बजारमा विचलित पार्दै जो पहिले नै हर दिशामा तानिन्छ।
दिईएको खण्डमा यो सँधै राम्रो लाग्दछ महसुस जस्तो कि तपाईले धेरै नराम्रो गरिरहनु भएको छैन। एक्ट्रोनको यो विस्तृत अनुसन्धान परियोजनाले तपाईंलाई सहज बनाउन मद्दत गर्दछ ... र सायद तपाईंलाई आफूले गरेको प्रगति र रोडम्यापको बारेमा लिनु भएकोमा राम्रो महसुस गराउँदछ। संभावनाहरू छन्, तपाईं कर्भ भन्दा अगाडि हुनुहुन्छ!
एकट्रनले २०१ Marketing को लागि डिजिटल मार्केटिंग र मार्केटि Technology टेक्नोलोजीमा परिवर्तन र रुझानहरू राम्रोसँग बुझ्नको लागि विस्तृत अनुसन्धान परियोजना शुरू गर्‍यो। उनीहरूले मार्केटर्स, आईटी पेशेवरहरू, विकासकर्ताहरू, र विभिन्न उद्योगहरूमा कम्पनीहरूमा सामग्री लेखकहरूलाई उनीहरूको डिजिटल रणनीति र प्रवृत्तिमा अन्तरदृष्टि सोधे। Website०० वेबसाइट र डिजिटल एजेन्सी पेशेवरहरूले आफ्नो राय दिए।
इन्फोग्राफिक अवतरण पृष्ठहरू र कल-टु-एक्शन उपयोग, सामग्री निर्माण, खोजी ईन्जिन अनुकूलन, विश्लेषण, सामाजिक मिडिया मार्केटिंग, इनबाउन्ड मार्केटिंग, निजीकरण, लक्षित, मोबाइल मार्केटिंग, एकीकरण, एक / बी परीक्षण, उत्तरदायी वेब डिजाइन र चाहे ती हाल कार्यान्वयन भइरहेका छन्, कार्यान्वयन हुने योजना गरिएको छ, वा निकट भविष्यमा लागू गरिनेछ। निष्कर्ष यो हो कि यस वर्ष मा एक जोड हो सामग्री निर्माण, लक्ष्यीकरण र निजीकरण.
टैग: ab testविश्लेषणकल-टु-एक्शन उपयोगसामग्री निर्माणctaविकासकर्ताहरूलेडिजिटल एजेन्सीडिजिटल मार्केटिंग कार्यान्वयनडिजिटल विपणन रणनीतिडिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलोजीहरूडिजिटल रणनीतिektronइनबाउन्ड मार्केटिङएकीकरणIT पेशेवरहरूल्यान्डिङ पृष्ठहरूबजारमार्केटिंग कार्यान्वयनमार्केटिङ रणनीतिमार्केटिंग टेक्नोलोजीहरूमोबाइल र ट्याब्लेट मार्केटिंगमोबाइल मार्केटिङनिजीकरणउत्तरदायी वेब डिजाइनखोज इन्जिन अनुकूलनसामाजिक मिडिया मार्केटिङलक्ष्यीकरण
B2B अनलाइन मार्केटिंगको लागि प्लेबुक
कसरी हामी म्यानुअल्ली वर्डप्रेस स्थापनाहरु को माइग्रेट
अगस्ट 26, 2014 मा 5: 27 AM
इन्फोग्राफिक्स साँच्चै गजबको छ ..